SAWIRRO: Xiddigaha Liverpool oo ay FARXAD badan ka muuqatay xilli ay Tababarka qaadanayeen maadaama….. – Gool FM
Manchester City oo si Xarago leh uga soo adkaatay Huddersfield…+SAWIRRO
Manchester City oo noqotay Kooxdii ugu horreysay YURUB ee…….
SAWIRRO: Xiddigaha Liverpool oo ay FARXAD badan ka muuqatay xilli ay Tababarka qaadanayeen maadaama…..
(England) 25 Dis 2018. Xiddiga Liverpool ayaa tababar fudud ku qaatay xeradooda Melwood iyagoo wada dhoola caddeynaya maadaama ay u dabaal degayaan inay ku fadhiyaan hogaanka Premier League fasaxa ciilada gaalada.
Waxaa intaa u dheer inuu dhaawac uga soo laabtay daafacooda da’da yar ee Trent Alexander-Arnold taa oo tamar cusub galin doonta kooxda ku dagaalameysa sidii ay muddo dheer kaddib ugu guuleysan lahayd horyaalka Ingiriiska.
Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Fabinho ayaa ka mid ah xiddigaha sida wayn u dhoola caddeynayay intii ay ku guda jireen tababarka kooxda.
Reds ayaa Boxin Day mininkeeda ku marti galin doonta kooxda Newcastle United ka hor inta aysan la ciyaarin Arsenal.
Cristiano Ronaldo oo isku dayay inuu DAYMO/EEGMO ku qal-qal galiyo Garsooraha....(Bal DAAWO wixii uu sameeyay kulankii Juventus iyo Roma)
Ilaa goorma ayaa la filayaa in Garoomada uu ka maqnaanayo Ousmane Dembélé? https://t.co/uKvO5LaBWm
Neymar Jr oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo ee ah inuu ku biiri doono kooxda Real Madrid https://t.co/BSOC6H9aps
Garsoore hore ee horyaalka Premier League oo DIGNIIN kulul u jeediyay Mohamed Salah https://t.co/Wutw2Mq69U